Ifulethi elitofotofo elalini - I-Airbnb
Ifulethi elitofotofo elalini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguKarola
Indawo yokuhlala -FeWo- ibekwe kwindawo yokuzonwabisa yendawo kwi-Ennert eBonn (168 m).
Indlu enamagumbi ama-2 evaliweyo (50 sqm) ikumgangatho wokuqala kwaye inokufikelelwa ngezinyuko ezijikelezayo. Yahlaziywa ngo-2015, ukusukela ngo-Epreli 2020 kukho iifestile ezintsha ezinokuvalwa kwesandi.
Ngasemva kocingo olubiyelweyo olungaphambili kwigadi kukho indawo yokutshayela kunye neyokuhlala yokuphumla; Iibhayisekile zinokufakwa egaraji xa ziceliwe. Kukho indawo yokupaka phambi kwesango leplanga elikwinombolo 96.
Indawo epholileyo ikwisithili saseNiederholtorf esikwi-168 m ngaphezu komphakamo wolwandle e-Bonn, ijikelezwe lihlathi kunye nebala, kodwa ngokuthe ngqo kwindlela yendlela yendawo: ukusukela ngo-Epreli ka-2020 zonke iifestile zintsha kwaye zingenasandi, njengesilingi yokulala ;-)
Indlu ikumgangatho wokuqala wendlu yam endala kwaye inokufikelelwa ngezinyuko ezijikelezayo. Ihlaziywe ngokupheleleyo ngo-2015.
Ehlotyeni kukho indawo yokuhlala egqunyiweyo kwigadi engaphambili ebiyelwe kakhulu enedama legadi, kwaye kukwakho nendawo yokutshayela.
Ukuhlala kumxube weendlela (igumbi lokuhlala / ikhitshi): isicoci samanzi sepurolux ekhitshini ngaphezu kwesitya: amanzi okusela ahlala ehluziwe; I-microwave ene-oven kunye nefeni, isitovu seplate ezimbini; I-TV / LCD isikrini esisicaba / isilawuli kude: nceda uqaphele ukutshintshwa kwamandla; Ikhitshi yensimbi engenasici kunye nefriji; I-WiFi, i-3-seater couch, i-armchair, itafile yokutya ejikelezayo kunye nezihlalo ezi-2 zeebhakethi; Umlandeli; Ukutya okusisiseko, izixhobo ezahlukeneyo zasekhitshini kunye nezitya.
Igumbi lokulala elikwindlela yolwandle eMantla:
kukho amanyathelo ama-2 ukuya kwigumbi, nceda uqaphele ukuphakama kwentloko yakho xa uhla, i-closet, idesksi; ehlotyeni: i-air conditioning; Ibhokisi lebhokisi - (i-140 cm) kunye nebhedi ye-bunk (80); Ifestile yophahla ene-shutter yangaphandle ye-roller kunye nomnyango omtsha ngaphandle kokuphuma, kuphela nge-grille.
Indawo yam yokuhlala ifaneleka kakuhle kwizibini, abahambi abangatshatanga okanye abahambi bezoshishino, kodwa kuphela kwinqanaba elilinganiselweyo kwiintsapho ezinabantwana abancinci: nangona kunjalo, ibonelela ngebhedi yokuhamba + isitulo esiphezulu.
I-Rheinsteig (indlela yokuhamba), iqonga lokubukela limalunga ne-2.8 km kude. I-Dornheckensee & namanye amachibi amabini, iDrachenfels (malunga neekhilomitha ezili-6), iDrachenburg (malunga neekhilomitha ezili-6), umbindi wesixeko iBonn (umgama oziikhilomitha ezisi-7: iBeethoven House, iBonn Museum Mile), iRheinaue (iikhilomitha ezi-3), iKommende Castle (2 km) , Siebengebirge, Petersberg, Ennert indawo zolonwabo yendawo.
4.91 · Izimvo eziyi-158
Indawo yam yokuhlala ijikelezwe ziindledlana zokukhwela intaba eziphakamileyo, amachibi, malunga ne-1.5km: iDornheckensee kunye neBlauer See, amasimi (150m), ihlathi (300m) ngaphandle kweBonn kwindalo kunye nendawo yokugcina iintaka e-Ennert, indawo yokumisa iibhasi. ibizwa Niederholtorf-Mitte (70m), indawo yokutyela elandelayo "13 Linden" (500), kwivenkilana (500), icawa (200m), yokubhaka (100m), Heisterbach eMonastri (5km).
Umbuki zindwendwe ngu- Karola
Ndikhona ngemibuzo kunye neengcebiso, ndihlala kwindlu esecaleni, inombolo 96, kuthotho lwe-2, ejonge egadini, khala nje intsimbi. Ukucela ikhowudi yomnyango, kunye nokungena kade.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bonn